Finesse: Wụnye, Tinye Ngwaahịa, Mee Ego. | Martech Zone
A na-eji anyị niile maka ụdị ecommerce ahụ na-ejikọ ngwaahịa ngwaahịa na taịl nke ngwaahịa na peeji nke ngwaahịa iji gosipụta foto, nkọwa na nyocha. A na-eji ahụmịhe azụmaahịa ndị ochie ahụ edochi na ahụmịhe ịzụ ahịa mara mma nke jikọtara atụmatụ niile nke sistemụ ọdịnaya mara mma yana ikike nke usoro sistemụ ecommerce.
The Isiokwu Finesse n'ihi na WooCommerce bụ ihe atụ zuru oke nke ọgbọ ọhụrụ a nke ahụmịhe ịzụ ahịa ndị a.
Finesse na-bụ WooCommerce Isiokwu ahụ ka ere. Edebere ya site na ala ruo oke mma, na-agbanwe agbanwe ma dịkwa mma maka ntụgharị. Ọ bụrụ n’ịchọkarị ịre ngwa ahịa gị n’ụzọ gị, Finesse bụ isiokwu gị!
Key atụmatụ nke Finesse isiokwu si plọ ahịa Designs
mfe Mbido - Bulite Finesse, tinye akara ngosi gị wee bido ịgbakwunye ọdịnaya gị.
Ihe Mgbochi ọdịnaya - Tinye nkanka na vibrant nzụlite machie na gị ahịa oyiri ise ndị ahịa gị na. Mee njikọ ha na iji video.
Mgbanwe wijetị - Fanye ngwaahịa ebe ịchọrọ, ma ọ bụ hapụ akụkụ ndị ị na-achọghị. Nọghị na ntọala izizi.
Unlimited ọdịda peeji nke - Mepụta ọtụtụ peeji ọdịda ka ịchọrọ. Mepụta ibe otu maka isi okwu ọchụchọ gi. Wayzọ ahụ ndị ọbịa si Google ga-aga ozugbo na ọdịnaya ha na-achọ.
mobile - emebere site na ala rue elu na nha na obere nha. Ọ bụ isiokwu dị obere nke na-eme nke ọma.
Ntughari kacha mma - wepu igodo na wijetị na ndenye ọpụpụ iji jide n'aka na ndị ọrụ anaghị pịa tupu ha emecha zụọ ha.
fọrọ nke nta - Ezubere maka oge ị na-ebuba ngwa ngwa iji melite ọchụchọ na ntụgharị.
Dịka ị pụrụ ịhụ n'okpuru, ọ bụ isiokwu dị egwu:
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ Plọ ahịa Designs.
Tags: mmaụlọ ahịa aghụghọwoocommercegburugburu woocommerce